Izinkomba zithi kubuya uBaxter kwiChiefs elaxaze uHunt - Impempe
Izinkomba zithi kubuya uBaxter kwiChiefs elaxaze uHunt
Sekuvele ukuthi kuzobuya uStuart Baxter kwiKaizer Chiefs exoshe uGavin Hunt ngoLwesihlanu ntambama. UBaxter uke wasebenza kwiChiefs futhi waba nempumelelo ebabazekayo ewina isicoco seligi nendebe.
Kodwa wakhetha ukushiya ngayo le sizini ayewine ngayo, kwavela ukungeneliseki ngendlela okusayinwa ngayo abadlali. NoHunt kuyavela ukuthi enye yezinto abezibanga nabaphathi wukuthi ubefuna ukuba nesandla ekutheni kusayinwa noma kuxoshwa bani.
Kuvela ukuthi uBaxter uzotheleka kuleli ngeviki elizayo ezoqedelela konke neChiefs bese eqala umsebenzi kahle ngesizini ezayo. Uvele uhlezi ekhaya ngemiva kokushipha kudliwa e-India la ayeqeqesha khona i-Odisha FC.
Wayishiya ilengela ezembeni. Waxoshelwa ukukhuluma budedengu ngodaba lokudlwengula ekubeni luvele luyinkinga kuleliya lizwe. Impempe isiphinde yathola nokuthi kungenzeka iChiefs ikhalele naku_Adel Amrouche okumanje uqeqesha iqembu lesizwe eBotswana.
Naye inkontileka yakhe iyaphela ngoJuni. Nokho useke wamataniswa ne-Orlando Pirates futhi uke wabonakala eGoli emavikini ambalwa edlule. Kuthiwa uyakuxoxa ukuthi uzoqeqesha eNingizimu Afrika maduzane yize engalivezi iqembu alosebenza kulo.
Previous Previous post: Usexoshiwe uHunt kwiChiefs
Next Next post: Uzidlele amahlanga uMantengu eshaya uMbumbulwana